I-LinkedIn Iqalisa i-Linkedin Website Demographics | Martech Zone
NgoLwesine, July 27, 2017 NgoLwesithathu, July 26, 2017 Douglas Karr
I-LinkedIn iqhekeza isici esisha esihle emasontweni ezayo, I-LinkedIn Website Demographics. I-Website Demographics isebenzisa idatha evela kumalungu angama-500 + we-LinkedIn ukunikeza ukuqonda ngezivakashi zewebhusayithi yenkampani yakho ngendlela ehlonipha ubumfihlo bamalungu.
Ifaka i-interface efundeka kalula kuMphathi Womkhankaso we-LinkedIn, I-Website Demographics ikuvumela ukuthi uhlunge izethameli zakho zewebhusayithi ngobukhulu obungu-8 bomuntu ngamunye, kufaka phakathi:
Ukuba mdala kweJobe
I-Website Demographics izokuvumela ukuthi uhlunge ngebanga ledethi ukuze uqonde ukuthi lowo mkhankaso wakamuva wokumaketha uwukhuphulele yini umgwaqo ovela ezigabeni zezethameli zakho. Ngaphezu kwalokho, manje usuyabona ukuthi ngabe uhehe amachibi amasha amathemba kuwebhusayithi yakho. Ngale mibono, ungenza okuqukethwe kokumaketha okusha okwenzelwe ukuzwana kangcono nalabo balaleli.
Isibonelo, ake sithi wenza ukumaketha kwebhizinisi le-IT futhi ngokwesiko ukhombe abaphathi bezobuchwepheshe base-US. Uma ubheka ideshibhodi yakho ye-Website Demographics, uthola ukuthi abaphathi bezokunakekelwa kwezempilo abasuselwa ku-EMEA bavakashela ikhasi lomkhiqizo ngaphezu kokucabanga kwakho. Unalolu lwazi, ungalungisa isu lakho lokumaketha ukuze ukhombe lezi zilaleli ezisanda kutholwa.
I-Website Demographics isinikeza imininingwane ethile ewusizo mayelana nezigaba ezahlukahlukene zamawebhusayithi ethu aphesheya. Kusisiza ukuthi siqonde kahle ukuthi sifinyelela izithameli ezifanele ngamasu ethu wokumaketha iwebhu futhi sinikeze nokucaca mayelana nezithameli zethu zewebhu kuwo wonke umjikelezo wokuphila kwamakhasimende. UBhanu Chawla, iNhloko Yezobuchwepheshe Bedijithali, iCornerstone OnDemand
I-LinkedIn Website Demographics iwukuqhuma okukhulu ekusizeni ukuthi wenze izinqumo zokumaketha ezinolwazi ukuze ukhulise ibhizinisi lakho. Ngokwazi ukuqoqa imininingwane ngaphambi, ngesikhathi noma ngemuva kwemikhankaso, ungathuthukisa isu lakho futhi wenze izinqumo zokukhalipha ezihlakaniphile.
Tags: Ama-Analyticsinkampaniusayizi wenkampaniizweifemuumkhakhaumsebenzi womsebenziisikhundla emsebenziniisihloko somsebenziLinkedInimininingwane yabantu bewebhusayithi ehlanganisiweindawoizibalo zewebhusayithiimininingwane yabantu kuwebhusayithi
Yimaphi amafonti amahle kakhulu we-imeyili? Ayini Amafonti Aphephile E-imeyili?
Jul 31, 2017 ngo-1: 52 PM
Hi Douglas Karr, Ngiyabonga kakhulu ngokubhala mayelana ne-Linkedin Website Demographics. Kuzosisiza kakhulu ukumaketha kwewebhu.